Iziphathamandla ze GMB Zithi Iwofisi Kamongameli Yiyo Eyenze Inhlelo Zenkampani le
Iziphathamandla zenkampani ye Grain Marketing Board (GMB) ngoLwesibili zitshele idale lephalamende ukuthi zonke inhlelo ezenziwa yinkampani le zivela emawofisini kaMongameli Robert Mugabe ngakho kunzima ukusebenza ngaphandle kweziqondiso zikahulumende.
Umnu. Patrick Dube okukhomithi yedale lephalamende ebona ngezokulima utshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zeGMB zithe izinqumo zewofisi kamongameli ziyaqakathekiswa lugatsha lwezokulima. Izinqumo lezi yizo ezithathwa yi GMB kungekho okunye engakwenza.
UDube uthi iziphathamandla lezi ziveze njalo ukuthi uhulumende wehluleka ukubhadala isikwelede se GMB phose izigidi ezingamatshumi amabili amadollar-$19million, yenhlelo ezinjengo kwabela uzulu imvundiso yama fertilizer, inhlanyelo lomumbu.
Ziphinde zatshela njalo idale lephalamende ukuthi okwamanje kulenhlelo ezintathu ezisanda kusungulwa nguhulumende zokwabela uzulu inhlanyelo lemvundiso ye fertilizer okwenza kungakhanyi lokuthi kwenzakalani eGMB.